महिला भए भित्र, सचिव बिचित्र « Jana Aastha News Online
महिला भए भित्र, सचिव बिचित्र
प्रकाशित मिति : ४ मंसिर २०७८, शनिबार १७:००
मन्त्री छिन्, विधि र व्यवस्था परिवर्तनको संघर्षबाट आएकी । तर, सचिव उनीभन्दा ठीक उल्टो, माया–प्रेमको संघर्षमा लिप्त ! रामकुमारी झाँक्रीले सम्हालेको शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको एक परियोजनामा छिन्, झापाली महिला । मन्त्रालयको सहसचिव वा विकासविज्ञ मात्र नियुक्तिको योग्यतामा पर्ने उक्त निकायमा ती महिला आयुक्त पदमा नियुक्त भएकी छन् ।
सचिव डा.रमेशकुमार सिंहले कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयमा एउटा अलग्गै कोठा लिएका छन् । त्यहाँ उनै महिला आयुक्तसँग नियमित ‘बैठक’, ‘छलफल’ जारी रहन्छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएकी हुन्, तर ओलीले चिनेर, चाहेर वा भनेर नियुक्त भएकी हैनन् । ऐनविपरीत उनलाई त्यहाँ नियुक्ति दिलाउने काम सचिवले गरेका हुन् ।
सचिव सिंहले महिला र पुरुषलाई गर्ने ‘रेस्पोन्स’ नै फरक छ । पुरुषहरू उनलाई भेट्न गए बाहिरै भेट्छन् । तर, महिला, चाहे जस्तासुकै र जेसुकै काम लिएर गएका किन नहुन्, सीधै गोप्य कोठामा बोलाउने ! सचिवको यो ताल देखेर मन्त्री रामकुमारी तीन छक्क परेकी छन् ।